September 2, 2013 – democracy for burma
NAY MYO ZIN:ယခုတိုင်ဖမ်းဆီးပြီး နေ့စဉ်နီးပါး-VIDEOS
On September 2, 2013 September 2, 2013 By Burma Myanmar newsIn BurmaLeaveacomment
ယခုတိုင်ဖမ်းဆီးပြီး နေ့စဉ်နီးပါး တရားရုံးတင်စစ်မေးနေသည့် ပန်းတနော်မြို့နယ် မှ ရေလုပ်သား ၂၄ ဦး မိသားစုများမှ ယနေ့တိုင် ပြန်မလွှတ်ပေးသေးသော အဖမ်းဆီးခံ အချုပ်သား မိသားစုများ ဘ၀
ပန်းတနော်မြို့နယ် အတွင်း ကျေးရွာ တရွာတွင် သားအဖ များ လိင်စော်ကားမှုဖြင့် ကိုယ်ဝန်ပျက်ကျ သေဆုံးခဲ့သော အိမ်ဖေါ်မိန်းကလေး အကြောင်းကို မေးမြန်းထားသော ဖိုင်
YANGON POLICE:သတင်းအမှားရေးသားဖော်ပြမှုအား ရှင်းလင်းမေတ္တာရပ်ခံခြင်း
ကားတိုက်ခံရပြီး လမ်းဘေးတွင်လဲကျနေကြောင်း၊ ကားမှာတိုင်းရင်းသား
ကျေးရွာ ဘက်သို့မောင်းနှင်ထွက်ပြေးသွားကြောင်း လာရောက်တိုင်တန်း
သဖြင့် မြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးက လမ်းကြောင်းပေါ်ရှိ ရဲစခန်း/ရဲကင်းများအား ပိတ်ဆို့ ရှာဖွေဖမ်းဆီးရန်ညွှန်ကြားခဲ့ပြီးအခင်းဖြစ်ရပ်သို့သွားရောက်
စစ်ဆေးခဲ့ကြောင်း၊ ထိုသို့စစ်ဆေးရာရှုခင်းသာ အပန်းဖြေစခန်းအနီးတွင် သာကေတမြို့နယ်နေ မခင်ဝင်းမာ (၁၇)နှစ်အား ယာဂျိုစောင်း
ပေးခဲ့ကြောင်း၊ အခင်းဖြစ်ပွားရာနေရာမှ သက်သေခံပစ္စည်းများကို
သွားခဲ့ကြောင်း၊ ထိုဓါတ်ပုံကို အများပြည်သူသိစေရန်
ဖော်ပြထားသည်ကိုတွေ့ရှိရပါသည်။ Continue reading “YANGON POLICE:သတင်းအမှားရေးသားဖော်ပြမှုအား ရှင်းလင်းမေတ္တာရပ်ခံခြင်း” →
Muslim extremist facebook page reveals ofaplan to bring Taliban against Sri Lanka
Some of the Muslims who live in Sri Lanka, too have commented there and rooted for this Taliban mission. We don’t know how they act in suchaway; living in this Buddhist country; enjoying all freedoms. This shows that Muslim extremism is developing in Sri Lanka; to destroy our most sacred Buddhist nation.
SOMEONE SHOULD BAN PAGE OF THIS IDIOTS
ဖြေ။ ။ လောလောဆယ်တော့ အပြန်အလှန်တိုက်ရိုက်ပြောဆိုဆွေးနွေးမှုတွေ၊ ကမ်းလှမ်းမှုတွေကတော့ ရက္ခိုင့်တပ်မတော်ကို တရားဝင်ကမ်းလှမ်းတာကတော့ ဒီနေ့ထက်ထိမရှိသေးပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ ရခိုင်ပြည်သူလူထု တစ်ရပ်လုံးက ကြိုဆိုထောက်ခံပြီး မျှော်လင့်တကြီး စောင့်မျှော်နေတာကိုတော့ ကျနော်တို့ရော၊ ဦးသိန်းစိန် အစိုးရရော သိသလို အကုန်လုံးလည်းသိပါတယ်။ Continue reading “Interview of Lieutenant Colonel Saw Wae Ne -Unity Journal သတင်းထောက် စောဇင်ညီတို့ အင်တာဗျူး။” →
On September 2, 2013 By Burma Myanmar newsIn UncategorizedLeaveacomment
Aranprayaprathet police sent their records and photos to Su-ngai Kolok checkpoint to keepaclose watch on their re-entry, police said. (MCOT online news)
ATTENTION : STILL CALLING FOR BLOOD-TYPE B in CHIANG MAI
I,M NOT DVB SUPPORTER, BUT IN THIS CASE
STILL CALLING FOR BLOOD-TYPE B in CHIANG MAI
DVB staff reporter Than Htike Oo is critically ill in McCormick Hospital. He was due to undergo surgery this evening but it has been postponed until tomorrow (Tuesday) morning because ofalack of blood type-B (apparently positive OR negative). Anyone who can donate, please call his wife, Noreen: 081-980-1621
SOURCE TAW WIN DAUND မီးလောင်ဗုံးနဲ့ပစ်ရင် အသက်ပေးပြီးကာကွယ်မယ်
ဘုန်းကြီးတွေကို မီးလောင်ဗုံးနဲ့ပစ်ရင် DKBA ကရင်တပ်က အသက်ပေးပြီးကာကွယ်မယ်